Fivezivezena any Toamasina :: Olona am-polony tra-tehaky ny Tafika tany Pangalana • AoRaha
Taorian’ny fandraràna ny fivezivezena tao an-drenivohitry Toamasina, nanomboka tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo, no hikasan’ny olona sasany an-toerana hitsoaka amin’ny lakandranon’i Pangalana. Mampiasa sambo haingam-pandeha ny Tafika Malagasy amin’ny fanarahamaso an’iny lakandrano iny, ka olona am-polony no tratehaka, omaly.
An-jatony ireo miaramila nalefa any Toamasina. Manao sesilany ny fandefasana miaramila avy amin’ny Tafika malagasy any an-toerana, izay hisahana ny fampanarahana ny fepetra amin’ny hamehana ara-pahasalamana ho fisorohana ny fihanaky ny tsimok’aretina « Covid-19 ». « Misy mpitsabo sy mpitsabo mpanampy amin’ireo miaramila ireo », hoy ny jeneraly Rabenaivoarivelo Jean Claude, lehiben’ireo Etamazaoron’ny Tafika malagasy.
Mampiasa ny hery rehetra eo am-pelan-tanany ny Tafika malagasy amin’ny fisorohana ny valanaretina any Toamasina. Ankoatra ny olombelona dia misy fiaramanidina telo sy fiarakodia miisa efatra amby roapolo ary sambo haingampandeha koa no nalefa any an-toerana.
Mameno ny tanàna ireo tafika, ka ankoatra ny fanaraha-maso ny fivezivezena dia manentana ny mponina ihany koa, indrindra amin’ny tokony hijanona any an-trano sy ny fampiharana an’ireo toromarika hiadiana amin’ny valanaretina. « Vonona amin’ny lafiny rehetra ireo andian-tafika. Toy ny natao teto an-drenivohitra dia hanidy tanteraka ny lalana mivoaka sy miditra an’i Toamasina ireo miaramila ireo. Misy koa ireo hifehy ny ao an-tampon-tanàna », hoy hatrany ny jeneraly Rabenaivoarivelo Jean Claude. Ankoatra ireo efa any an-toerana dia nisy ny fandefasana miaramila fanampiny miisa dimampolo sy roanjato, afak’omaly.
Fitsoahana :: Vaky ny fonjan’Ambatolampy